Posted by AungKoU (UMK) on November 17, 2012 at 11:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
( How to speak English ?)
စကားပြောခြင်းသည် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် အလွန်အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှ အကြောင်းအရာများစွာကိုစကားဖြင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြရသည်။ စကားကိုစနစ်တကျ ပြောတတ်ခြင်းသည်လည်းအရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားကိုပင် စကားပြောတတ်သူတိုင်းမိန့်ခွန်းများ၊ ဟောပြောချက်များစသည်ဖြင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုစနစ်တကျပြောဆိုတတ်ရန် မလွယ်ဘဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွက်မူပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးအရေးကြီးသည်မှာယခင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအသံ၏သဘောတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ရမည်။
စကားပြောခြင်းဆိုသည် ပန်ကုံးတစ်ကုံးသီကုံးသည်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူပါသည်။ ပန်းကုံးတစ်ကုံးသီကုံးရာတွင် ပန်းကုံးတွင်ပါဝင်သောအရာများကိုစနစ်တကျမသုံးသပ်မိကြသကဲ့သို့ စကားတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရန်မေ့လျော့ နေတတ်ကြသည်။ ဆဲလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပွင့်ချပ်များပါဝင်သည့် ပန်းပွင့်များကိုအပ်ချည်ကြိုးဖြင့်သီးကုံးလိုက်သောအခါ ပန်းကုံးတစ်ကုံးဖြစ်လာသည်။ ထို့အတူစကားပြောခြင်းသည် အသံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောစကားလုံးများကိုဝါကျများအဖြစ် တည်ဆောက်ကာ ၎င်းဝါကျများကိုပြောလိုသောအကြောင်းအရာသက်ရောက်အောင် စုစည်းလိုက်ခြင်းဖြင့် စကားဖြစ်လာသည်။
ဖော်ပြပါဆက်စပ်မှု ပုံစံသည် ဘာသာစကားလေ့လာသူတိုင်းအတွက် စနစ်တကျလေ့လာသင်ယူရန် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။ စကားပြောဆိုရာတွင် အရေးကြီးသည့် အခြေခံအကြောင်း (၂) ချက်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားရန် နှင့် ချောမွေ့ပြေပြစ်ရန် ဖြစ်သည်။ ပြောစကားတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုသည် အရေးကြီးသောအကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်သောကြောင့် အသံကိုစနစ်တကျနားလည်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်၊ အသံ၏သဘောတရားများကိုသေသေချာချာနားလည်မှသာပြောစကားများကိုနားလည်နိုင်ပြီး ပြန်လည်အတုယူပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ ဦးစွာအသံ၏ သဘောတရားများကိုအသေးစိတ်ပြောလိုပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အသံထွက်(pronunciation) နှင့် စာလုံးပေါင်း(spelling) ထပ်တူမညီသည်မှာ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခန့်အထိရှိသည်။ စာလုံးပေါင်းပုံစံတူသော်လည်းအသံထွက်မတူသည်ကိုအများအပြားတွေ့ရမည်။ (e.g. put, but)စာလုံးပေါင်းပုံစံမတူဘဲအသံထွက်တူညီသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။ (e.g. see, key, tea)အက္ခရာတစ်ခု(alphabet) သည် စကားလုံးတစ်ခု၏ စာလုံးပေါင်းတွင်ပါဝင်ပြီးအသံထွက်ရာတွင် မပါဝင်သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။(e.g. psychology, listen) ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကိုစာလုံးပေါင်းအတိုင်းအသံထွက်၍မရသောကြောင့် အသံများကိုသေသေချာချာလေ့လာရန်လိုသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အက္ခရာ(alphabet) ၂၆ လုံးသာရှိသော်လည်းဗျည်းသံ(consonant sound) ၂၄ သံ နှင့် သရသံ(vowel sound) ၂၀ စုစုပေါင်း ၄၄-သံရှိသည်။ အသံထွက်များကိုစာဖြင့်အတိအကျ ရေးသားဖော်ပြရန် မလွယ်ကူသဖြင့် အသံထွက်သင်္ကေတ (phonetic symbols) များနှင့် ဥပမာစကားလုံးများဖြင့်သာဖော်ပြပါမည်။
သရသံများ (vowel sounds)
အသံ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဗျည်းသံ၊သရသံများသာမက stress သည်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစကားဖြစ်ရန်အတွက် ဖိသံ(stress)ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဖိသံ(stress)ကိုနားလည်ရန် စကားလုံးတစ်လုံးတွင် ပါဝင်သောအသံ(ဝဏ္ဏ)များကိုသိရမည်။
ဥပမာ syl-la-ble အသံ၃-သံ
၎င်းအသံ(ဝဏ္ဏ) များပေါ်တွင် ဖိသောအသံ(stress)ကို'အမှတ်အသားဖြင့် ဖော်ပြသည်။စကား၏ဝတ္တရား(part of speech) အပေါ်တွင်မူတည်၍ stress ပြောင်းသွားတတ်ပါသည်။ အသံ-၂သံ ရှိသောစကားလုံးတစ်လုံးတွင် နာမ်(noun)ကိုပထမအသံတွင် ဖိရပြီး ကြိယာ(verb) ကိုဒုတိယအသံတွင် ဖိရသည်။
ဖော်ပြပါနောက်ဆက်ပုဒ်များပါဝင်သည့်စကားလုံးများတွင်စကားလုံး၏နောက်ဆက်သံကို stress ဖြင့်ရွတ်ဆိုရသည်။
စကားပြောဆိုရာတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းနားလည်နိုင်စေရန် intonation ကလည်းအရေးကြီးပါသည်။ စကား၏အဓိပ္ပာယ်၊ စကားပြောသူ၏သဘောထား၊ စကား၏ဆိုလိုရင်းစသည်တို့ကိုနားလည်နိုင်ရန်intonationကကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ စကားပြောဆိုရာတွင် intonation ပြောင်းသွားပါကလည်းဆိုလိုရင်းရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားနိုင်သည်ကိုသတိပြုရမည်။အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရာတွင်နားလည်ထားရမည့်အခြေခံ intonation (၃)မျိုးကို"အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုချဉ်းကပ်ခြင်း"ဆောင်းပါး (Education Digest Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၃၅၊၃၆)တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။အသံထွက်သည် listening အတွက်ရော speaking အတွက်ပါ အလွန်ရေးကြီးပါသည်။ အသံထွက်ကိုသတိမထားပါကနားထောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်းနားလည်မှုလွဲမှားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- row နှင့် roll ကိုကြားသောအခါ သတိမထားပါကနားကြားလွဲကာအဓိပ္ပာယ်ပါလွဲမှားနိုင်သည်။
- အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ရာတွင် မိမိ၏အသံကိုအသံဖမ်းပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၊ မူရင်းအသံများနှင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးကာအမှားများကိုသတိထားပြီးမှန်သည်အထိအကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် လေ့ကျင့်ပါ။ ပထမဆုံးအသံထွက်မှန်ရန်သာ ကြိုးစားပါ၊ အသံမှန်သောအခါ stress, intonation များကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ၊ လေ့ကျင့်ရာတွင်သတိပြုရမည်မှာ ကြားသည့်အတိုင်းဆိုပါ၊ ဤနေရာတွင် စာဖြင့်ဖော်ရသည်မှာအတန်ခက်ခဲပါသည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ယနေ့ခောတ်ကလေးငယ်များသည် 'Justienber' စသည့် ရေပန်းစားသည့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းများကို ကြားရများလာသောအခါ နားရည်ဝပြီးသီဆိုတတ်ကြသည်၊သီဆိုရာတွင် ပီပီသသမှန်မှန်ကန်ကန် သီဆိုနိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ ၎င်းကလေးငယ်များသည် ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်ဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကမူနားကကြားသော်လည်းမူလအသံကိုသတိမထားဘဲမိမိအသံထွက်တတ်သလိုဆိုတတ်ကြသည်၊ ထိုအချက်ကိုသတိထားဆင်ခြင်ကြရမည်။
- အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားသောစာသင်ခန်းအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းတတ်နိုင်သမျှ အင်္ဂလိပ်လိုသာပြောဆိုပါ၊ မိမိလေ့ကျင့်မှတ်သားထားသောစကားလုံး၊ ဝါကျများကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ထည့်ပြီးပြောပါ။
- ရိုးရိုးစကားပြောပုံစံများလေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ မိန့်ခွန်းများ၊ သတင်းများအစရှိသည်ဖြင့် လိုအပ်သည်များကိုအထက်ပါနည်းများအတိုင်းဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ၊ စကားပြောဆိုရသည့် အခြေအနေပြောင်းသည်နှင့်အမျှ ပြောရသည့်ပုံစံများပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဈေးဝယ်ရာတွင် ပြောသည့်စကားပြော နှင့် ရုံးဋ္ဌာနများတွင် ပြောသည့်စကားပြောပုံစံများတူမည်မဟုတ်ပါ။ (စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ လေယူလေသိမ်း၊ အထူးသဖြင့် ပြောဟန်ဆိုဟန်များမတူညီသည်ကိုဆိုလိုသည်)
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုအခြေခံကာနေ့စဉ်မှန်မှန် လေ့ကျင့်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချောချောမွေ့မွေ့ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ "The fastest way to learn anything is to do again and again until to get it right."ဟူသောစကားအတိုင်းလိုချင်သည့် ပန်းတိုင်ကိုရောက်သည်အထိစိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ကာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းရေးသားလိုက်ပါသည်။
Education Digest Journal Vol-1, No-41, 42
ဘယ်လိုပြောမလဲ.pdf, 234 KB
Permalink Reply by Ratan Biswas on November 17, 2012 at 19:35
Permalink Reply by unoqueen on November 17, 2012 at 20:34
Today Sayar U Mya Kyaing spoke us.Anyway thank you.May be next time what vedio listenig is good can you guide me.
Permalink Reply by tinmaraye on November 17, 2012 at 21:48
Thank you.Please give us audio file.
Permalink Reply by Nyein Nyein Soe on November 17, 2012 at 23:16
Permalink Reply by u san win on December 23, 2012 at 11:52
Permalink Reply by Kaungmalay111 on November 18, 2012 at 9:49
Permalink Reply by phyu phyu mar on November 18, 2012 at 15:11
Permalink Reply by oneonekaw on November 18, 2012 at 15:32
Permalink Reply by Thike Htun on November 18, 2012 at 17:01
Permalink Reply by 3qba1hury79kn on November 22, 2012 at 12:01
Permalink Reply by Thet Swe Swe on November 23, 2012 at 14:21
Thanksalot for your sharing and good example for the words as " စကားပြောခြင်းဆိုသည် ပန်ကုံးတစ်ကုံးသီကုံးသည်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူပါသည်။"
Permalink Reply by La Yaung on November 24, 2012 at 0:44
The fastest way to learn anything is to do again and again until to get it right.
I like this sentence and I also think like that to get something.
Thanks Sayar Aung.